Ingabe Online Your Social Amaphrofayli Wrecking Ebuhlotsheni Your?
Uyazi ungekho umuntu kuphela ngubani ngokweqile efuna izinsuku on social media sites and izinjini ezama bambe up ukungcola, kwesokudla? Uyazi yini lokungcolisa yakho Internet ethi ngawe ebudlelwaneni bakho ezingaba khona?
The lokubiza Friend
Just bangaki red amafulegi Kungenzeka yini ukhulisa nabangani bakho kanye nabalandeli izinhlu? Mhlawumbe ngaphezu ucabanga. Omunye izingcezu kufinyeleleke kakhulu ulwazi ngawe, okungenani uma kuziwa kuyi-Internet, kuba obani abangane bakho. Dates Okungaba babengase ebuka izinhlu yakho futhi ukwakha imibono pretty eqinile.
Uma ubheka uhla abangane ngokushesha, one piece of ulwazi abazokwazi zisuka: isilinganiso amadoda kwabesifazane ohlwini. Abesifazane unabangane abaningi besilisa kungaba kwangethusa izinsuku ezingaba khona. Bazophuma ukuzibuza ukuthi angobani wonke la guys kukhona, ukuthi ubudlelwane, futhi ngokunokwenzeka basongelwe. Kungokufanayo uya abesifazane abenza ngibheka amadoda on media social. Uma bebona a lot of abesifazane ohlwini, Bazophuma ukuba nelukuluku futhi baqaphe kakhudlwana.
Amabhukhmaki ezokuxhum kuyindlela enhle yokugcina in touch futhi engase ukuxhuma babantu oyijabulela, kodwa futhi igcwele izihloko-inkinobho hot. Abantu abaningi basebenzisa izingosi zokuxhumana ukulandela izimbangela sezombangazwe nezenhlalo ezibalulekile kubo. Abanye baze basebenzise njengencwadi soapbox ukuze alwela izithakazelo zabo pet. Kwavezwa imibono eqinile kungaba kakhulu off-ngokubeka izinsuku ezingaba khona, abangasithandi ezivumelana ngenhliziyo yonke zonke issue.
Akuyona ekahle ukuthola umngane womshado iyavumelana nawe njalo nangeyodwa, futhi kungcono ngaso sonke ukuba sigcine izingqondo zivulekile. Uma ezibakhungathekisayo umngane nezithakazelo zakho yezombusazwe, ungase ube babadedisela off futhi ezidudula phambi kwenu ngisho nethuba ukuthola esivumelana.
The Izicelo You Make
The ezimbili ubulokhu nithandana ngesonto, futhi kuzoba kuhle. Kodwa ngaphambi kwakho nekama ngokusebenzisa abangane babo uhlu futhi ezibakhungathekisayo wonke amalungu emikhaya yabo nabajwayelene nabo nezicelo, ume ucabange. It akufanelekile umngane ezakubo, abazali esikoleni esiphakeme buddies ngaphandle uma ngokucacile ucela imvume ukwenza kanjalo.
Kwenze ngemuva owakwakho noma ngaphandle kwesivumelwano yabo, futhi ungase avale looking like a Stalker. Ngisho nalapho izinhloso zakho ngokuphelele elingenacala, kuzoba ukubheka Xwaya uma ngokungazelelwe ubhekene ubungane bonke abangane babo. Umuntu ophola uyozizwa ozama ukuba babe neso kwabo, futhi lokho bekungakwenza akhulise zonke izinhlobo nezindaba trust.
The ifotho Nawe
You dieted wonke ebusika futhi manje ubheka amazing kulowo swimsuit brand new-... kodwa lokho akusho ukuthi kufanele usabe nezwe. The izinto embule ezithombeni zenu kungenzeka enikeza off the isinyathelo esingafanele ngohlobo lomuntu oyilo. Bonisa off a lot of isikhumba, noshade naye ezingase zibe wayesengaba nomhawu. Babekwazi ziphelelwe inhlonipho ngawe. Babekwazi ubonise ngisho izithombe zakho kwabanye abantu, noma kabusha ukushicilela nabo futhi sabelane nabo emhlabeni, uma bebezimisele kuphela ukwabelana pics nge khetha a ezimbalwa.
Uma ubeka into Internet, umuntu angathola kukho futhi wonke umuntu Bayoba imibono ngakho. Khumbula ukuthi ngaphambi kwakho ukubukisa ukuthi shot swimsuit.
The Hlangothi Game
Nakekela in kanjani wena uzinikele on izingosi zokuxhumana. Awufuni ukuba embule kakhulu. Lokho picture goofy kini ukuthi umthanda lapho ubhekene baquleka embhedeni angase avuse nezinkumbulo ezinhle kuwe, kodwa ongase usuku kungaba red flag big. Ungase ungalokothi uthole ithuba lokuchaza ukuthi ukuziphatha okunjalo kahle esedlule.
Bonisa ubuntu bakho online, kodwa ukukhombisa version elihluziwe. Ufuna ukuthola umngane womshado othanda lokho oyikho ngempela, futhi uyoba namathuba amaningi ukuze embule izingqimba zakho. Akudingeki ukusheshe ukukhombisa zonke izici yakho off on the Internet.
Five Life Izifundo Efundwe Cats nebudlelwane
Lapho ngiqala ukuhlangana isoka lami, Christopher, Eminyakeni emihlanu edlule, Kwadingeka eyodwa kuphela izicathulo flat - scuffed ...